Ady amin’ny kolikoly :: Ho fantara alohan’ny 23 jona izay ho tale jeneraly vaovaon’ny Bianco • AoRaha
Ady amin’ny kolikoly Ho fantara alohan’ny 23 jona izay ho tale jeneraly vaovaon’ny Bianco
Afak’omaly no daty farany fanaterana ny antontan-taratasy ho an’ireo olona liana amin’ny toeran’ny tale jeneraly vaovaon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ ny kolikoly (Bianco). Tsy hiandry ela ry zareo Komity mitandro ny fahitsiana (CSI) fa amin’ ny herinandro ihany dia hiroso amin’ny fifantenana ireo kandidà telo hatolony mba hisafidianan’ny Filoham-pirenena amin’ny fanendrena an’izay ho tale jeneraly vaovaon’ ny Bianco. Tsy ho dilan’ny datin’ny 23 jona, raha ny fantatra, no hivoahan’izany anarana izany.
“Amin’ny 25 jona no hiala eo amin’ny toerany ny talen’ny Bianco am-perinasa. Dimy taona tsy azo havaozina no hitondran’izay ho tale jeneraly vaovao hotendrena eo”, hoy ny talen’ny fifandraisana avy eo anivon’ny CSI.
Tokony hahaleo tena tanteraka hatrany izay olona vaovao hitazona indray an’io toerana io. Tanjon’ny Bianco hatramin’ny taona 2025 ny fampiakarana ny tahan’ny trangana kolikoly eto Madagasikara ho lasa 50/100. Ao koa ny fanohizana ny fampiharana ny Paikady nasionaly hiadiana amin’ny kolikoly (SNLCC), ny fanaraha- maso sy fandraisana andraikitra manoloana ireo trangana risoriso rehetra, ary ny fahaiza-mitantana sy fahamendrehana eo amin’ ny fitondran-tena.
Fanararaotana krizim-pahasalamana Andian’olona mikononkonona fanakorontanana
Fetim-pirenena 2020 Foana tanteraka ny arendrina sy ny afomanga
Fampielezan-kevitra :: Manabaribary ny famitaham-bahoaka ataon’ireo kandidà ny KMF/CNOE